Забур 73 CARS - Nnwom 73 AKCB
NHOMA A ƐTO SO ABIƐSA
1Ampa ara Onyankopɔn ye ma Israel,
oye ma wɔn a wɔn koma mu tew.
2Nanso me de, anka me nan reyɛ awatiri;
anka merehwere me nnyinaso,
3efisɛ mʼani beree ahantanfo
bere a mihuu amumɔyɛfo yiyedi no.
na wɔwɔ ahoɔden ne apɔwmuden.
5Dadwen a ɛtaa ba nnipa so biara nna wɔn so;
ɔdesani haw biara nna wɔn so.
6Enti ahantan yɛ wɔn kɔnmuade,
na wofura akakabensɛm.
7Wɔn koma a apirim no mu na nnebɔne fi;
na wɔn amumɔyɛ adwene nni awiei.
8Wɔserew afoforo na wɔka wɔn ho nsɛm a enye;
wɔde nhyɛso hunahuna afoforo wɔ ahomaso mu.
10Ɛno nti wɔn nkurɔfo kɔ wɔn nkyɛn
na wonya nsu nom ma ebu so.
11Wobisa se, “Ɛbɛyɛ dɛn na Onyankopɔn ahu?
Na Ɔsorosoroni no wɔ nhumu ana?”
12Sɛɛ na amumɔyɛfo no te,
hwee mfa wɔn ho, na wɔkɔ so pɛ ahonyade.
13Ampa ara, mannya hwee amfi me komamtew mu;
me nsa a enni fɔ no ayɛ ɔkwa.
14Da mu nyinaa mihu amane;
15Sɛ mekae se, “Mɛkasa saa” a,
anka midii wo mma no huammɔ.
16Mebɔɔ mmɔden sɛ mɛte eyinom nyinaa ase,
17kosii sɛ mekɔɔ Onyankopɔn kronkronbea hɔ;
ɛhɔ na metee nea awiei no ɛbɛba wɔn so no ase.
18Ampa ara wode wɔn gu faako a hɔ yɛ toro
19Sɛnea wɔsɛe prɛko pɛ,
na ehu hwim wɔn kɔ no.
20Ɛte sɛ adaeso, bere a onipa anyan,
Awurade, sɛ wokanyan wo ho a,
wubebu wʼani agu wɔn so sɛ biribi a enni hɔ.
21Bere a awerɛhow hyɛɛ me koma mu
na me honhom dii yaw no,
22meyɛɛ sɛ obi a onnim hwee na onni adwene;
meyɛɛ sɛ aboa gyimfo wɔ wʼanim.
23Nanso na me ne wo wɔ hɔ bere biara;
na wode wo nsa nifa aso me mu.
24Wode wʼafotu kyerɛ me kwan;
na akyiri no, wode me bɛkɔ anuonyam mu.
25Hena na mewɔ wɔ ɔsoro ka wo ho?
26Me honam, ne me koma bedi me huammɔ,
nanso Onyankopɔn ne me koma ahoɔden
Wosɛe wɔn a wonni wo nokware nyinaa.
28Nanso me de, minim sɛ eye sɛ wobɛbɛn Onyankopɔn.
Mede Otumfo Awurade ayɛ me guankɔbea;
mɛka wo nneyɛe nyinaa akyerɛ.
AKCB : Nnwom 73